ကိုကိုပြုသမျှခံပါ့မယ် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on January 20, 2021 Author admin	Comments Off on ကိုကိုပြုသမျှခံပါ့မယ်
သံလျှင်ဘက်ကမ်းရောက်တော့ လမ်းရှင်းပါတယ်ဆိုပြီး အရှိန်တင်လိုက်တယ်။ လူက ကိုယ့်အတွေးနှင့် ကိုယ်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကရုမစိုက်အားဘူးဗျ။ လမ်းသွယ်လေးကနေ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အတင်းထွက်လာတယ်။ ကားရှေ့အထိရောက်လာတာကြောင့် ကျွီ..ဟီ..ဟီ..ကျွီ ကားဘရိတ်ကိုအတင်းဖမ်းနင်းရင်း ဒေါသထောင်းကနဲ ထွက်သွားတယ်။ မတိုက်မိပေမယ့် ဆိုင်ကယ်ကလဲတယ်။ လဲသာလဲသာ သောက်ခလေးမက လက်ထဲက ရေခဲချောင်းကို မလွှတ်ဘူး။ သိတဲ့အတိုင်း အလုပ်ထဲမှာဆဲနေကျပုံစံအတိုင်း အယုတ်တအနတ္တတွေ ထွက်သွားတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုထူရင်း ကြည့်လိုက်ကာ ဟေ့ကောင်မလေး..ဒါကာကား ဟဲ့ကားတိုက်ရင် သေတတ်တယ် နားလည်လား၊ နင်လင်မလိုချင်တော့ဘူးလားအံမာ တိုက်ချင်တိုက်ပလိုက်၊ လင်မလိုချင်တော့ဘူးလား ဘာလာနဲ့ ကျနော်လည်း အဲဒီအခါမှ သတိထားမိတယ်။
ကောင်မလေးက မျက်ကြောတင်းလေး ဆေးဆိုးဆံပင်လေးနှင့်။ ရုပ်လေးက ချစ်စရာလေးပါ။ တော်တော်လေးလည်း လှတယ်။ သူ့အရပ်နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ အလှအပ အဖုအထစ်တွေက ရင်ခုန်စရကြီးပေါ့။ ရင်ထဲမှာ ရေခဲမြစ်လေးစီးဆင်းသွားတယ်။ သိပ်ချစ်သွားပြီခေးရယ်။ အဲဒီလိုပါ လင်ယူမယ်ဆို ငါ့ကိုစဉ်းစားပေးပါလို့အမ်မသာကြီး..ရုပ်ကဖြင့် သင်းချိုင်းကို ခြေတလှမ်းနေပြီ ငါခဲနှင့်ကောက်ထုလိုက်ရ ကောင်မလေးက ပါးစပ်ကလည်းပြောရင်း ခဲကောက်ကိုင်လို့ ကျနော်ကားပေါ်တက်ပြီး အတင်းမောင်းပြေးရတော့တယ်။ ဟိုက် မလွယ်ကြောဇတ်ဇတ်ကြဲလေး ကျနော်..အဲဇတ်ဇတ်ကြဲလေးကိုခိုက်သွားတယ်။ အင်း..အသက်ကလည်း ခြောက်နှစ်လောက်ကွာမယ့် သဘောရှိတယ်။ ဒီလိုအလန်းလေးက ငါလိုလူကို ဘယ်ကြိုက်မလဲကွာ.. ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အချစ်ကို ရဖို့ငါ့သိက္ခာတွေမာနတွေကို ခဝါချရမှာပဲလေ။ ချစ်တော့လည်း လူငယ်စတို၈်ဖမ်းရမှာပေါ့။
နောက်နေ့ အဲဆော်ကို အဲဒီနေရာလေးမှာပဲ ကြိုစောင့်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ အဟဲနဖူးစာရွာလယ်ပြီ။ ရန်ကုနသားနှင့် သံလျှင်သူ၊ အဟီး..မိုက်တယ်။ အော်..ငါတော့ ရှင်မွေ့လွန်းနှင့်တော့ တွေ့ပြီ။ အင်း..အဆင်ပြေအောင်ပဲ လုပ်ရမယ်၊ ငါ့အသက်က မိန်းမယူရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီပဲ။ စိတ်ကူးနှင့်ရူးပေါ့ဗျာ သီရိတစ်ယောက်ပေါက်ကွဲနေတယ်။ မနက်က ရေခဲချောင်းလေးဝယ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လက်တဖက်နှင့် ထိန်းစီးပြီး လမ်းသွယ်က လမ်းမကြီးပေါ်တက်တော့ အရှိန်နည်းနည်းလွန်ပြီး သူများလမ်းကြောပေါ် ရောက်သွားတာ။ ရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့ ကားနှင့်တိုက်မိတော့မလို့။ လဲသွားတာ လူကို မထူပဲဆိုင်ကယ်ကိုထူတယ်။ ပြီးတော့ သောက်အားမနာလည်း ပြောသေးတယ်။ ဘာတဲ့ လင်မလိုချင်ဘူးလားတဲ့။ သူ့အပူကျနေတာပဲ။ ပြီးတော့လည်း ရိသဲ့သဲ့ရည်းစား စကားပြောသေးတယ် လူကဘဲ အိုဘဲနာကြီးဖြစ်နေပြီ ဒီကမှ ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ အားမနာလျှာမကျိုးပြောတယ်။
စိတ်တိုပြီးခဲနှင့်ထုမလို့ ခွေးသားကြီးတွေ့ရင်တော့.ဟင်းးးဟင်းး ဒေါသစိတ်လေးလျော့လိုက်ပြီးမှ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တယ်။ အသက်သာကြီးတာပါ။ ရုပ်ကမဆိုးဘူးပဲ အမယ်သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရေမွေးနံတွေနှင့် မွေးနေတာပဲ။ ရေမွေးပုလင်းများ ဖိတ်ကျလာခဲ့သလားမသိဘူးအာ..ငါဘာတွေတွေးမိနေတာလဲ ဆတ်ဆတ်ကြဲလေး သီရိရင်ထဲ အတွေးတချက် ခဏတာလေးဝင်သွားတော့။ သီရိတစ်ယောက် ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးမိသွားတယ်။ သီရိလည်း ကျောင်းဘက်တက်ဖို့အတွက် ဆိုင်ကယ်ကို ကျောင်းဘက်ဦးတည်ထွက်လိုက်တယ်။ ကျောင်းဘက်ရောက်ပြီး ကျနော်လည်း အလုပ်များနေတာကြောင့် ဘယ်မှမထွက်ပဲ အလုပ်အတွက် စီစဉ်ပေးနေရပေမယ့် ခုနတုန်းက လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကောင်မလေးက အတွေးထဲမှာ စိုးမိုးနေတာကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုံးမိတယ်။ ဆယ်လီနာဂိုမက်လို လှတဲ့ကောင်မလေးရယ် မင်းဆီမှာလဲလေ။
နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ ကင်တင်းဘက်ကို သွားလိုက်တယ်။ ဆိုင်ကလည်း ရင်နီးနေပြီ။ ဆိုင်ရှင်မချယ်ရီက အခါတိုင်းဆို ကျနော်ကနောက်ကျပြီးမှ လာလေ့ရှိတော့ အံဩနေတယ်။ ဆိုင်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ များနေလို့ လက်မလယ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ဆိုင်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟားးးး ဟိုကောင်မလေး၊ ကြည့်စမ်း ဝေးဝေးရှာစရာမလိုဘူး ဒီကျောင်းကပဲ. နဖူးစာမှန်တော့တွေ့ရပြီပေါ့။ ထမင်းပေါင်းတစ်ပွဲလာချ၊ ပြီးတော့ သံပုရည်တစ်ခွက် အောသူမှာပြီငါခွင်ဖန်ပြီးအနားကပ်လိုက်ဦးမယ်။ အကြော်ဆရာ ထမင်းပေါင်းမြန်မြန်လုပ်ကွာဆရာစားမလို့လား၊မဟုတ်ဘူး ဟိုဆော်လေးလေသူမှာတာအော်မသီရိလား.မင်းသိလို့လား.သိတယ် ဂျစ်တူးမဟေ..သီရိတဲ့လားသီရိရတနာတဲ့ ဆရာအေးးးရပြီလား၊ထမင်ပေါင်းရပြီဆရာပေး..ငါ့ကိုပေးဆရာပို့ပေးမလို့လားအင်းးးးး ကျနော်လည်း ထမင်းပေါင်းပန်းကန်ယူကာ သီရိအနားကိုသွားပြီး ရပါပြီ.ထမင်းပေါင်း သီရိမော့ကြည့်တော့ ရင်တောင်ခုန်သွားတယ်။
ဟာ. ဘဲရီးစားပွဲထိုးလားဟုတ်ကဲ့ သီရီသဘောကျသွားတယ် လက်စားချေခွင့်ရပြီ။ အော.ရေနွေးပေးဦးရမယ်. ကျနော်ရေနွေးအိုးချပေးလိုက်တယ်။ တစ်ရှူးဘူးပေးအုံးရမယ် တစ်ရှူးဘူးချပေးလိုက်တယ်။ ဟင်..ဇွန်းတွေကမသန့်ဘူးပေးပါ.ကျနော်ရေနွေးစိမ်ပေးမယ် ရေနွေးစိမ်ပေးပြီးဇွန်းခက်ရင်း ဆေးပေးလိုက်တယ်။ စားပွဲခုံက ညစ်ပတ်နေတယ်။ သုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့အနားမထိတထိလေးကပ်ပြီး သုတ်ပေးလိုက်တာ။ ဟေ့လူ..ဘာလို့အနားကပ်တာတုန်းအဲသေသေချာချာကြည့်ချင်လို့ပါဘာရှင့်..အော် မောင်လေးဇော်မိုး.. အားနာလိုက်တာကွယ်၊ သီရိညီမလေး သံပုရာရည်သောက်ဦးမလား ကျနော်လည်း မချယ်ရီအနားရောက်ာလို့ ဆက်စကားမပြောပဲ ခွာလိုက်တယ်။ မချယ်ရီနှင့် သီရိတို့စကားပြောနေတယ်။ မချယ်ရီက ကျနော့်ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီး အားတုံ့အားနာ ဖြစ်နေပုံပဲ။ သူကတော့ ပြုံးစိစိနှင့်… အင်းးသီရိရယ် မင်းငါ့ကိုပြုစားနိုင်တယ်ကွယ်။
ညနေသဲုးနာရီလောက်အလုပ်ကနေပြနခဲ့တယ်။ ဘုရားကုန်းကျော်ပြီး ကျိုက်ခေါက်အလွန်မှာ သီရိကိုဆိုင်ကယ်တွန်းရင်း လမ်းမှာတွေ့တယ်။ ဟေ့…သီရီဟင်..ဘဲရီးဟာတစ်ခါတည်းဘဲ အဖြစ်ခေါ်လိုက်တာလားဘာရှင့်.နာချင်ပြန်ပြီအာကူညီမလို့ပါကွာမလိုဘူး..ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပဲ၊ ရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေက နည်းနည်းကူညီမယ်၊ ခင်ချင်တယ်ပြောမယ်၊ ပြီးရည်းစားစကားပြောမယ်မ သိတာကျလို့အောသီရိကကြိုသိပြီးပြီပဲ.. အဖြေပေးဖို့ စဉ်းစားတော့ဘာရှင့်..ပေးပါ.ဆိုင်ကယ်၊ ရော့ကားသော့ကားပေါ်နေခဲ့ ဆိုင်ကယ်သွားပြင်လာခဲ့မယ် ကျနော်ကားသော့အတင်းပေးပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တွန်းလာခဲ့တယ်။ ဆယ့်ရှစ်ကုန်းမှာ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မရှိတော့ အောင်ချမ်းသာအထိ တွန်းလာခဲ့တယ်။ မောမှန်းတောင်မသိဘူး၊ အချစ်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါက်ဖွားနေလို့ပေါဗျာ။ ကားသော့လေးပေးပြီး ဆိုင်ကယ်တွန်းကာ ထွက်သွားသော ကိုဇော်မိုးကို သီရိသနားသွားမိတယ်။
စိတ်ထဲလည်း ကြည်နူးမိတယ် သူ့အပေါ် တကယ်ဂရုစိုက်သော လူတစ်ယောက်၊ ချစ်သောသူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သီရိစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး သူတပါးကို ကူညီတတ်သော ဘဲရီးကိုလေးစားသွားတယ်။ ဘဲရီးကတော့ သီရိအပေါ် တရားဝင်ချစ်ခွင့်ပန်လာမှာကိုလည်း တွေးမိတယ်။ အဲလိုဆိုရသ်လည်း ကိုယ့်အပေါ် ဘ်းလောက်သည်းခံနိုင်မလဲ စမ်းသတ်ဖို့ စဉ်းစားမိပြီး မိမိအဖြစ်ကို ရယ်ချင်နေမိတော့တယ်။ ကျနော်လည်း ဘီးဖာပြီးဆိုင်ကယ်စီးကာ သီရိဆီလာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သီရိကိုသော့လှမ်းပေးရင်း သီရိရော့သော့..ကလေးတွေစာသင်ရဦးမယ်မလားဟင်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲသီရိဆယ်တန်းကလေးတွေကို ဂိုက် လုပ်နေတယ်မလား သွားတော့ ဆိုင်ကယ်တွန်းထားတာ ချွေးတွေနဲ့.. ရေလေးဘာလေးချိုးပြီးမှ သွား၊ မဟုတ်ရင် ကလေးတွေမူးလဲသွားမယ်ဘာ…ရုပ်ကလေးကလှရက်သားနဲ့ လူကညစ်ပတ်လို့။
ဘာ…ဘာပြောတယ်ဟဲ..ဟဲအလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ရေမချိုးဖြစ်ဘူးဆိုအမလေး စွပ်စွပ်စွဲစွဲသွားတော့လေ သီရိမနက်မှ ကိုစောင့်နေမယ် သီရိလန့်တောင်လန့်လာတယ်၊ ဒီလူကြီးက သီရိအကြောင်းသိနေလို့လေ၊ သီရိရယ်ချင်သွားတယ်၊ စိတ်ထဲမှာလည်း တွေဝေသွားတယ်၊ ဘဲရီးနှင့်တွေ့တော့ သီရိစိတ်ထဲ ဘဲရီးကစိုးမိုးပြီးနေတာလေ။ ညနေကလေးတွေနှင့် စာသင်နေရင်းပြုံးမိတယ်။ ညလည်း အိပ်မပျော်ဘူး မနက်ရောက်တော့ စောစောလေးထလိုက်တယ်။ ရေမိုးချိုးပြီး အလှပြင်ရာက ရယ်ချင်နေတယ်။ ဘဲရီးကိုလည်း တွေ့ချင်တယ်။ လူဆိုးကြီး တဖြေးဖြေးနှင့်သီရိစိတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်တယ်ဟင်းး အဲဒါနှင့်ဆိုင်ကယ်လေးထုတ်ပြီးစီးကာ လမ်းထိပ်ကိုထွက်တယ်၊ လမ်းထိပ်ဝဲယာကြည့်တော့ ဘဲရီးကားကိုတွေ့တယ်။ လမ်းထိပ်ဆိုတော့ သီရိရှက်သွားတယ်။ မတော်တဆ အိမ်ကလူတွေနှင့်တွေ့ရင် အရှက်ကွဲမှာမို့ ခေါင်းငုံပြီး ဆိုင်ကယ်အတင်းမောင်းထွက်ပြီး ကျောင်းကို လာခဲ့လိုင်တယ်။
စောစောရောက်တော့ ယောင်ချာချာနှင့်လေ၊ ကျနော်လည်း ကျနော့်ရှေ့က ဆိုင်ကယ်အတင်းမောင်းသွားတဲ သီရီနောက်က လိုက်ခဲ့တယ်။ သီရိနောက်ကကားရပ်ပြီး သီရိ..တစ်ခုခုစားရအောင်ဟုတ်..ဟုတ် ကျနော်ကင်တင်းဘက်ကိုလမ်းလျောက်ရင်းကနေ သီရိကိုကြည့်တော့ သီရီကခေါင်းငုံကာ စဉ်းစားနေတယ်။ သီရိ..ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်ရှင်…ဘဲရီး၊ အဲလိုပြောဖို့မစောလွန်းဘူးလားမစောဘူး..မင်းအနားမှာရှိတဲ့၊ ချစ်ရင်ထူး၊ မဟူရာနှင့် ဟိုဘဲလေးတွေရဲ့ခေါတော တစ်ထောင်နှင့်ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက စိုးရိမ်စရာကောင်းလို့ပါအမ်..သူတို့ကနှာဗူးအကြည့်နှင့်ကြည့်တယ်ပေါ့.. ဘဲရီးက ဘယ်လိုလုပ်သိလဲမြွေမြွေချင်းခြေမြင်တယ်လေအဲဒါဆို ဘဲရီးလည်းနှာဗူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်က အချစ်စွမ်းရည်နှင့် ကြည့်တာပါဘဲရီးက လိပ်မျိုးပဲသိပ်သိတတ်တယ်သီရိကိုယ့်ကိုအဖြေပေးဦလေချက်ချင်းဘယ်ပေးမလဲစောင့်ပေါ့အေးပါကွာစောင့်ပါ့မယ် ဒီလိုနှင့်ကင်တင်းထဲရောက်တော့ စားစရာမှာလိုက်တယ်။
ကျနော်ကကော်ဖီ၊ သူကလက်ဘက်ရည်တဲ့။ ကျနော်လည်း အကြိုက်တူအောင် လက်ဖက်ရည်မှာရတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းတော့လည်း သူကအရှင်းမခံဘူး၊ သူ့စားတာသူသောက်တာ သူ့ဟာသူရှင်းသွားပြီး၊ ကျနော်ကို ထားကာကျောင်းထဲကိုသွားတယ်။ သူ့မာနကို လုံးဝအထိမခံတဲ့မိန်းကလေးပါဗျာ။ သီရိတစ်ယောက်ရင်ထဲမှာတွေဝေခဲ့ရပြီ။ ရည်မှန်းချက်တွေ တလှေကြီးနှင့် နေလာခဲ့တာ။ ကိုဇော်မိုးရဲ့အကြင်နာချစ်ခြင်းက သူအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့ရပြီ။ ဘယ်သူခံနိုင်မလဲလေ ကိုယ့်လောက်ဂျစ်ကျနေသူတစ်ယောက် သိသိကြီးနှင့် ဆိုးတဲ့သူအပေါ် သည်းခံစိတ်တွေမွေးပြီး ကိုယ့်ပေးမဲ့ မေတ္တာတရားကို စောင့်မျော်နေသူအပေါ်မှာ နှလုံးသားက ချစ်ခွင့်ပေးလိုက်မိပြီ။ ကိုဇော်မိုးအပေါ်မှာ ချစ်မိပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ် ထိပါးလာမှာလည်း စိုးတယ်။ လောကဓံတရားကို အံတုပြီးရွဲ့တတ်တဲ့ သီရိရဲ့အပြုအမူတွေကို ကိုဇော်မိုးနားလည်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။
နောင်တပတ်တွေမှာလည်း ဇော်မိုးဟာ သီရိနှင့်အမြဲတွေ့တယ်။ သီရိဆိုးနွဲ့တာ ခံရင်းနှင့်ပဲ သီရိ ကိုသီရိလေးကိုချစ်တယ်ကွာ.. သီရိသဘောထားလေးသိပါရစေတော့သီရိကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး ကိုကိုကိုယ့်ကို ကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နှော် သီရိ’အာ မသိဘူးထပ်ခေါ်ကွာသီရိရာခေါ်ချင်ပါဘူးခေါ်ပါသီရိရာဘဲရီးဟာကွာ..ရွတ် ကျနော်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ အားမလိုအားမရဖြစ်လာလို့။ အာ ကိုကိုနှော်ဟေးးးးးပျော်တယ်ဟေ့..ဟားးးဟားးးးဟားးးးဟာ ကိုကိုဘာတွေဖြစ်နေလဲဝမ်းသာလွန်းလို့ပါကွာခစ်..ခစ်..ခစ်ကိုကိုတို့ဘုရားသွားရအောင်ဒီမှာကိုကို ဒါမျိုးကရိုးနေပြီ၊ ပထမဘုရားသွားမယ်၊ ဒုတိယပန်းခြံသွားမယ်၊ ပြီးရင် ဟိုတယ်ကိုခေါ်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူးမလားဟာသီရိကလည်းကွာ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးဘာမဟုတ်ရမှာလည်းကိုကို၊ အဲဒါယောက်ျားလေးတွေ လုပ်နေတဲ့ သီအိုရီပဲလေအင်းသီရိမှတ်ထားနှော်. ကိုကိုက သီရိကို ဘယ်တော့မှဟိုတယ်မခေါ်ဘူး။
တကယ်လား ကိုကိုအင်းးးသီရိက ဟိုတယ်ပဲသွားချင်တာနိုး မခေါ်ဘူးကိုကိုပိုက်ဆံမရှိလို့ မဟုတ်လားဘာ..မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် တစ်လလောက်ဟိုတယ်မှာ ဟန်းနီးမွန်းလုပ်ပစ်မှာ.. သီရိကိုမနားစေရဘူးသွားညစ်ပတ်ဟားးးးးဟားးမကြောက်ပါနှင့်သီရိရယ်ဘာလဲပဲမြစ်မို့လားအမ်..ပဲမြစ်..ဟားးးးဟားးးးးတော်ပြီ…..ဘဲရီးသီရိကိုကိုချစ်တယ်ပြောလေချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်သီရိရယ် ကျနော်လည်း သီရိကိုဖက်ပြီး သီရိရဲ့နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကျနော့်အနမ်းတွေကို ပြန်တုန့်ပြန်ပြီးနမ်းတယ်ဗျ။ အချစ်ကိုတွေ့ရတော့ ရင်ခုန်သံချင်းပါနီးစပ်ခဲ့ပြီလေ။ တစ်ယောက်နှင့်နှင့်တစ်ယောက် အမြဲပဲတွေ့ချင်တယ်။ တွေ့ရင်လည်း သီရိက ဘာပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးပေး လက်မခံဘူးဗျ။ အစားအသောက်စားရင်တောင် တစ်ယောက်တလှည့် အကုန်ခံခိုင်းတယ်။ ကျနော်ဘယ်လိုမြိုကျမှာလည်းဗျာ။ သူ့မှာ ကလေးတွေကျူရှင်ပြရင်း ပိုက်ဆံရှာတယ်။
ဘဝအတွက်ဆိုပြီး သင်တန်းတွေတက်တယိ။ ကျနော်သူ့ကို စိတ်မချတော့ဘူး၊ သူ့မှာလည်း ယောကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေက အများသား။ သိတဲ့အတိုင်းမစားရညှော်ခံ။ အနံ့ရှူနေတဲ့ချစ်ရင် ထူးနှင့်မဟူရာတို့ရှိတယ်။ ဖုန်းတွေပြောတယ်။ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပြီး ပိတ်ပင်လို့ကမရဘူး။ ကျနော်သီရိကို အပိုင်ချည်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ လုံးဝလက်မခံဘူး။ ကိုကိုသီရိကိုချစ်ရင် အဲလိုမလုပ်နဲ့တဲ့ဗျာ ကျနော်အကြံအစည်တွေထုတ်နေတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနှင့် ချစ်သူသက်တမ်းသုံးလပြည့်တဲ့အခါ ကျနော်အလုပ်တွေလည်း ပြီးပြီမို့လို့ ကျနော်သီရိတို့ကျောင်းကို မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ သင်တန်းတက်ချိန် မနက်ပိုင်းတော့ တွေ့ခွင့်ရတယ်။ နှစ်ယောက်သား ခဏတော့ စကားပြောဖြစ်တယ်လေ။ နီးနေတဲ့အချိန် သိပ်မသိသာပေမယ့် ကျနော်တစ်လလောက် ခရီးထွက်ရတဲ့အခါ အရမ်းလွမ်းလာတယ်။ သီရိလည်း ကျနော်လိုပဲလွမ်းနေတယ်လေ။ ပြန်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ပြောထားလို့ ကျနော်သီရိဆီကိုဖုန်းဆက်တယ်။
ခလေးလေးကိုကိုပြန်ရောက်ပြီမနက်သီရိဆီလာလေ’လာချင်တယ်ကွာ.ကိုကိုအရမ်းလွမ်းနေပြီသီရိလဲအရမ်းလွမ်းနေတယ်ကိုကို၊ သီရိဆီလာခဲ့ပါကွာကိုကိုနေမကောင်းဘူး သီရိရယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကို၊ သီရိလာခဲ့မယ်လေ ကျနော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ အိမ်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းလေ။ သီရိလာရင် ကျနော်..ချစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အကြံအစည်တွေ လုပ်လိုက်တယ်။ ပဲမြစ်မဟုတ်ကြောင်း သီရိသိသွားစေရမယ်လေ။ ကလင်..ကလင်သီရိ..လာပြီပဲအင်းကိုကိုလွမ်းတယ်သီရိရယ် ကျနော်သီရိကိုဖက်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်။ အာ….ကိုကိုအိမ်မှာလူမရှိဘူးလားရှိဘူးလေဟော့တော့. ဘာလို့လိမ်ခေါ်တာလဲ နေမကောင်းဘူးဆိုပြီးသီရိကလည်းကွာ ကိုအရမ်းလွမ်းနေလို့သီရိလည်းလွမ်းတယ်ကိုကို.ဒါပေမယ့်………သီရိရယ် ကိုကိုသီရိကိုအရမ်းချစ်တာလေသီရိသိပါတယ်ကိုကိုရယ်၊သီရိလေ အပျိုစင်ဘဝကို ဒီလိုကြီး… ကျနော်သီရိနှုတ်ခမ်းကိုလက်ညှိုးလေးနှင့် ပိတ်လိုက်တယ်။
သီရိရယ်ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ချစ်သူဘဝမှာ ဒီလိုပဲချစ်ကြတာပဲလေ၊ ကိုကိုသီရိကို လက်ထပ်ယူမှာပါ.. ကိုကိုသီရိအပေါ်မှာ တသက်လုံး သစ္စာရှိရှိ ပေါင်းသင်းမှာပါသီရိရယ်ဒါဆိုလည်းဂတိပဲနော်အေးပါသီရိရာနောက်ကျမှ သီရိကိုပစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သီရိက ဂရုမစိုက်ဘူးကိုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်လွန်းလို့ပါ သီရိရယ်အင်းပါ ကိုကိုချစ်တယ်သီရိရယ် ကျနော်လည်း သီရိခါးကိုကျစ်နေအောင်ဖက်ရင်း သီရိမျက်နှာအနှံ့ အနမ်းမိုးတွေရွာချလိုက်တယ်။ တအိမ်ထဲ နှစ်ယောက်တည်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိက ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်အရမ်းလှူပ်ရှားစေတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးလည်းဖြစ်တော့ လူမရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တော့ သီရိရောကျနောရော ကာမစိတ်ကို ထိမ်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ။ ကျနော်သီရီနှုတ်ခမ်းသားလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ သိရီလည်း ရမက်ခိုးတွေဝေလာပြီလေ။ မျက်တောင်လေးစင်ပြီး ကျနော်အကြင်နာတွေကို မျော်လင့်နေပြီလေ။
ကျနော်သီရိကို အနမ်းလေးပေးရင်း သီရိအကျီလေးကို အပေါ်မချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိရဲ့စနေနှစ်ခိုင်ပေါ့ဗျာ လှလိုက်တာ။ နေရောင်မထိဘဲ ဖွင့်ထွားချက်ဖြူဖွေးနေတာပဲ၊ ရင်သားတွေက ဘရာအပေါ်မှာ ထွက်လုဆဲဆဲပေါ့။ ကျနော်လည်း ဘရာချိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးသီရိနို့တွေကို ကြည့်မိတယ်။ စိတ်တွေထန်နေတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေစူပြီး ချွန်ထွက်နေတယ်၊၊ ပန်းရောင်သမ်းတဲ့ နို့သီးခေါင်းနှင့် ဝန်းရံထားတဲ့ နိုးဝန်းလေးတွေက ချစ်စရာအလွန်ကောင်းနေလို့ ကျနော်လည်း ရေငတ်နေသူပမာ တပြွတ်ပြွတ် အငမ်းမရစို့လိုက်တယ်။ ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်အားးးကိုကို..အားးးးဖြေးဖြေးစို့ပါကိရယ်ကိုအားရပါးရစို့ပါရစေ သီရိရယ်အင်းပါ ကိုကိုရယ်.. သီရိက ကိုကိုပြုသမျှ ခံရတော့မှာပဲလေအဲလိုသဘောမထားနဲ့လေချစ်ရာ၊ ချစ်ကြပြီဆိုမှတော့ စိတ်တူကိုယ်တူချစ်ချင်တာအင်းပါ ကိုကို ကိုကိုစိတ်တိုင်းကျသာချစ်ပါ၊ သရီခံပါ့မယ်သီရိကလည်းကွာ သီရိအကြိုက်လေးပြောပေါ့။
ဟင့် သီရိမှမလုပ်ဖူးသေးတာ ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲအင်းလေ သီရိ၊ လုံချည်ပါချွတ်လိုက်တော့မယ်ကိုကို့သဘောပါကိုကို သီရိရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတော့ ကျနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ လုံချည်ကို ချွတ်လိုက်တယ်။ လုံချည်လေးကျွတ်ပြန်တော့ ပင်တီလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ အနက်ရောင် ပင်တီလေးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိကလည်း ကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီး အချွတ်ခံတာလေ။ သီရိက ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့တွက် ပိပိကို ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့ရပေမယ့် ဆီးခုံမှာမမွေးလေးတွေ ပေါက်နေတာကြောင့် ကျနော်စိတ်က အရမ်းကိုဖီလ်းဖြစ်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကျနော်သီရိကို အရမ်းလွမ်းတယ်။ သီရိကလည်း ကျနော်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာလေ။ ကျနော့်ရဲ့တဏှာစိတ်က ငယ်ထိပ်အထိရောက်နေတယ် ပြောရမလားပဲ။ သီရိနို့ကိုစို့ပြီးပြီဆိုတော့ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်က သီရိပိပိလေးကို အရမ်းယက်ပေးချင်တာပေါ့။ သီရိကို ကိုကုတင်ပေါ်လှဲလိုက်တယ်။ မို့ဖောင်းနေတဲ့ ပိပိကအရမ်းကိုလှတယ်ဗျာ။
ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူး။ သီရိဘယ်လိုခံစားနေလဲ ကျနော်မသိချင်ဘူး။ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို ကျနော်လက်လွတ်မခံတော့ဘူးလေ။ ကျနော်ကုတင်အောက်ကနေကာ သီရိပေါင်လေးကို ကားကာအပေါ်မြှောက်တင်လိုက်တယ်။ အရွတ်သေးသေးလေး ပိပိအကွဲကြောင်းက ကျနော့်ကိုယက်လှဲ့ပါ။ လို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါ။ သီရိပိပိအကွဲကြောင်းအောက်ခြေမှာတော့ ကျနော့်ချိုစို့ပေးမှုကြောင့် အရည်ကြည်ချောဆီလေးတွေ စိမ့်နေတယ်ဗျာ။ ကျနော်အတွက်တော့ အချစ်ရေ ချိုချိုလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ချစ်သူရဲ့ပိပိက ထွက်တဲ့အရကြည်ချိုချိုလေးကိုယက်လိုက်တယ်။ ပလပ်..ပလပ်အားး အင့်ဟင့် ကို..ကိုရေ..အားး သီရိဆီက အချစ်အသံလေးထွက်ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်လျှာကို အပြားလိုက်လုပ်ပြီး အားရပါးရ ယက်လိုက်တယ်။ အာ့အင့်ဟင့်ဟင့် ကိုကိုရယ် ချစ်ရူးရလိမ့်မယ် အဲဒီအသံလေးက ကျနော့်စိတ်ကို အရမ်းဖီးဖြစ်စေတယ်။
အရွတ်သေးသေး တွန့်တွန်းလေးကိုလည်း လျှာနှင့်အပြားလိုက် ယက်လိုက်တယ်။ အင်းးဟင်းးးဟင်းးကိုကိုအရမ်းကောင်းးတယ်ကွာ သီရီကအိပ်ရာခင်းကိုဆွဲဆုပ်ကိုင်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းနေရှာတယ်။ သူ့အတွက်လည်း ဒါဟာ ပထမဆုံးအချစ်ခံရခြင်းလေ။ ပထဆုံးအထိအတွေ့ကို အရသာရှိနေအောင် ကျနော်စွမ်းဆောသ်ပေးနေတာလေ။ တချက်တချက်ယက်လိုက်တိုင်း သီရိဗိုက်သားလေးတွေ တင်းတင်းသွားတယ်ဗျာ။ လျှာကိုဖိပြီးမြုပ်သထက်မြုပ်အောင် ဖိသိပ်လိုက်တယ်။ အပျိုစစ်လေးဖြစ်လို့ အကွဲကြောင်းက ပေါင်ကားထားပေမယ့် စေ့နေတယ်လေ။ ကျနော်အားစိုက်ရတယ်လေ။ အကွဲကြောင်းတလျောက် အတင်းယက်ရင်း သီရိအစေ့ကလေးကို ထိအောင်ယက်လိုက်တယ်။ ပိပိကမို့ဖောင်းနေတာမို့ အစေ့ကအထဲမှာ ရောက်နေတာလေ။ အစေ့ကလေးကို လျှာနှင့်ကလော်ပြီးနိုးဆွပေးလိုက်တယ်။ ဖိသိပ်လိုက် ကလော်လိုက်မို့လို့ သီရိမှာ တဟင်းဟင်းအော်နေရပြီ။
သီရိပိပိကလည်း အရည်တွေရွဲရွဲစိုနေတာလေ။ အရည်တွေ လျှာနှင့်သိမ်းယက်ပြီးမြိုချလိုက်တယ်။ အားးကိုကို..သီရိရင်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်ကြီးကွာ ကျနော်သီရိ အစေ့စုပ်လို့ရအောင် ပိပိနှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဘက်ဖြဲလိုက်ပြီး အစေ့ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။ အာ့ရှီးးရှီးး အာ့ ကိုကို သီရီတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာတယ်ဧလ။ သီရိအော်ဟစ်ညည်းညူရင်း တွန့်လိမ်ကာပြီးသွားတယ်။ အားးကိုကိုထွက်ကုန်ပြီထွက်ကုန်ပြီအားးးရှီးးရှီးးး သီရိဆီကအရည်တွေလှမ့်ထွက်လာတယ်ဗျာ။ သီရီပြီးသွားတော့ ကျနော်လီးက အတွင်းခံဘောင်ဘီထဲမှာ အရမ်းရုန်းထွက်နေပြီ။ ကျနော်ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်တော့ ကျနော့်လီးက ချက်အထိကပ်နေပြီ။ ဟယ်..အကြီးကြီးပါပဲလားကိုကိုအင်းသီရိထင်မထားဘူးကိုကို.ကြောက်စရာကြီးမကြောက်ကာနှင့်သီရိရယ်.သူလည်းသီရိကို အရမ်းချစ်တာ နာအောင်မလုပ်ပါဘူး.. သီရိကော သူ့ကိုအကြင်နာမပေးချင်ဘူးလား။
အွန်း…သီရိကြောက်တယ်လုပ်ပါကွာ သူလည်းသီရိအကြငိနာကို တမ်းတနေပြီကြင်နာပေးချင်တာပေါ့ကိုကိုရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဥစ္စာပဲလေ သီရိလည်းပြောရင်း ကျနော့်လီးကို ကိုင်ဆွဲပြီးစုပ်လိုက်တယ်။ ကျနော်လီးဟာ လုံးပတ်တစ်လက်မ သုံးမတ်အချင်းရှိကာ အရှည်ခြောက်လက်မ စွန်းစွန်းကလေးရှိတယ်။ ဆယ်တန်းကတည်းက အရေပြားဖြတ် နောက်လှန်ချုပ်ထားပြီး ချုပ်ရိုးနေရာမှ ဖုထစ်တွေထနေတယ်။ ကိုကို ဒါကြီးဘာကြီးလဲ ကိုကိုနောက်လှန်ချုပ်ထားတဲ့အရာပါကွာအမလေးကြက်သီးထလိုက်တာကွာ သီရိကပြောလည်းပြောစုပ်လည်းစုပ်လိုက်တယ်။ သီရိက သူ့ပါးစပ်ထဲလီးဝင်ဆန့်အောင် အားထုတ်စုပ်လိုက်တယ်။ နူးညံ့တဲ့သီရိရဲ့ လျှာအစွမ်းကြောင့် ကျနော့်လီးက အစွမ်းကုန်တောင်လာတယ်။ အကြောကြီးပျိုင်းပျိုင်ထပြီး သံခေါင်းတစ်ချောင်းလို မာထန်လာတယ်။ သီရိခင်မျာ ကျနော့်လီးဒစ်ကြီးငုံစုပ်ရတာကြာတော့ ညောင်းလာတယ်။
အပြင်ကပဲ ရေခဲမုန့်စားသလို လျှာနှင့်လီးဒစ်ကို ယက်ပေးတယ်လေ။ စူကြားဖူးနာဝရှိသလိုပဲလုပ်ပေးရှာတယ်။ သဲ အပေါက်ကလေးလျှာလေးနှင့်ထိုးပေးအင်းးအင်းးး လီးကိုယက်ရင်းခေါင်းညိတ်ပြရှာတယ်။ ပြီးတော့ လီးအဝလေးကိုလျှာနှင့်ထိုးပေးရင်း ဒီလိုလားကိုကိုအင်းကောင်းလိုက်တာသီရိရယ်ကိုကိုကသာကောင်းနေသီရိမှာတော့ အာတွေညောင်းလှပြီအင်းပါသီရီရယ်.. ကိုကိုလိုးပါရစေတော့ကိုကိုသေဘာပါ ကိုကိုကဲ ခုနတုန်းကအတိုင်းလေးနေ၊ ကိုကိုကုတင်အောက်ကနေပြီး လုပ်မယ် သီရိလည်း ကုတင်အောက်ခြေဆင်းထိုင်ရင်း နောက်သို့လှချလိုက်တယ်။ ပုံစကတော့ ကျနော့်အကြိုက် ကုတင်ကန့်လန်ဖြတ်အိပ်တဲ့ပုံပါ။ ဒီလိုးနည်းက အရမ်းအားရစရာကောင်းတယ်။ သီရိခြေနှစ်ဘက်မိုးပေါ်ထောင်လိုက်တော့ သီရိအဖုတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်သးပြူးပြီး ထွက်လာတယ်။ ကျနော်လည်း လီးကိုလက်တဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး လီးဒစ်မြုပ်ရုံ အကွဲကြောင်းတလျောက် ရှေ့တိူးနောက်ဆုတ် လုပ်လိုက်တော့။
အာ့..အင်းးဟင်းးးကိုကို သီရိရဲ့အသံလေးကတုန်တုန်ရီရီလေး ထွက်လာတယ်။ ကျနော်လည်း ပိပိအပေါက်ထဲလီးကို ဖိနှိပ်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ လီးဒစ်ကဝင်သွားတာ သီရီရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေပါ လိပ်ဝင်သွားသလို မြင်ရတယ်ဗျာ။ ပြွတ်..ပလွတ် ဆိုတဲ့အသံနှင့်အတူ အားး ကိုကို.အားကျွတ်ကျွတ် သီရိရဲ့အလန့်တကြားအော်သံနှင့်အတူ လက်ကတွန်းထုတ်တယ်။ လီးကသုံးလက်မခန့် သီရိအဖုတ်ထဲလီးက တင်းကြပ်စွာဝင်သွားတယ်။ ဗျစ်..ဗျစ်အသံနှင့်အတူ အားးလားးလားကိုကိုဖြေးလုပ်ပါအင်း…..းပါသီရိရယ် ကျနော်လည်း သီရိသက်သာအောင်နို့ကို ကုန်း၍စို့လိုက်တယ်။ နို့ကိုဘယ်ရောညာရော အပြန်အလှန်ဘက်ညီအောင့်စို့ရင်း လျှာဖျားလေးနှင့် ယက်လိုက်တယ်။ ကုန်းစို့ရင်းပင် သီရိပုခုံးအောက်လက်လျိုပြီး လက်ကို ပက်လက်ထားကာ ပုခုံးကိုဆွဲကိုသ်လိုက်တယ်။ သီရိကတော့ အဖုတ်မှာလီးဝင်ရင်း နို့စို့ခံရတဲ့အတွက် နာနေရာက သက်သာလာတယ်။
ကျနော်လည်းလီးကိုအဆုံးထိ မသွင်းပဲ ဒစ်ကြီးနှင့်အစေ့ကို ပွတ်ဆွဲပေးပြီး တဖြေးဖြေး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်ရာ အင့်..ဟင့်..ဟင့်…ရပြီကိုကို ကျနော်နောက်ထပ်နှစ်လက်မခန့် ထပ်သွင်းလိုက်တယ်။ ဗြိ..ဗြိ..ဖောက်အားးကိုကို…အားးနာလိုက်တာ ကိုကိုရယ် ကျနော်လီးကအမှေးပါထိုးခွဲပစ်လိုက်တာလေ။ ဒစ်ကားကြီးဆိုတော့ အမှေးကွဲပြီပေါ့ဗျာ။ ခဏလေးပါသီရီရယ်၊ အပျိုစစ်အမှေးပါး ပေါက်သွားလို့ပါအင်း..သီရိသိတယ်ကိုကို အဲလိုနာမှာစိုးလို့ ကိုကိုကို သီရိမပေးခဲ့တာ အခုကော ဘာလို့ပေးလဲဟင်ကိုကိုကို အရမ်းချစ်လို့ ကျနော်ထပ်ပြီးမသွင်းရဲသေးဘူး။ တင်းကျပ်လာတဲ့ အဖုတ်ညှစ်အားကို ကျနော်ခံစားရပြီ။ နောက်ဝင်လာမယ့်လီးအတွက် ကြောက်လန့်ပြီး ညှစ်လေသလား ကောင်းလွန်းလို့ ညှစ်လေသလားတော့ သိတော့ဘူး။ ခဏလေးရပ်ကာ နို့ကိုကုန်းစို့လိုက်တယ်။ ခဏတာဝေဒနာလေးခံစားပြီး နောက်မှာတော့ ရပြီကိုကိုသီရိခံနိုင်ပြီ သီရိခံနိုင်ပြီဆိုမှ ကျနော်ကျန်ရှိတဲ့လီးကို သွင်းလိုက်တယ်။
ကျနော်ဆီးခုံနှင့် သီရိဆီးခုံကပ်သွားတဲ့အထိ ဖိကပ်လိုက်တယ်။ ဂေါ်လီသီးလို ချုပ်ရိုးကဘုတွေက သီရိအဖုတ်နံရံတလျောက် ပွတ်ဆွဲလို့နေတယ်။ အာ့..ကိုကိုရယ်…အာ့.၊သားအိမ်များထိလေသလားကိုကို အထဲကအောင့်သွားတယ်မထိပါဘူးသီရိရယ်.အစမို့ပါကွာ.. ကိုကိုဆက်လိုးတော့မယ်နော်အင်းလိုးလေကိုကို ကျနော်လည်း လီးကိုတစ်လက္ခခန့်ချန်ပြီး အသွင်းအထုတ်မှန်မှန်နဲ့ အသားကျလေးကျင့်လိုးလိုက်တယ်။ ဗျစ်..ဗျစ် ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်အာ့အင့်..ဟင်းးးဟင်းး သီရိကတော့မျက်လုံးလေးစုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ကာ ညည်းတွားနေတယ်လေ။ အာ့..ရှီးးရှီးမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါ ကိုကို ထိန်းပြီးလိုးနေတဲ့ကျနော်ဝမ်းသာသွားပြီး မြန်မ်ြန်လေးလိုးလိုက်တယ်။ ကျနော်ရဲ့ဆောင်ချက်မှာ သီရိအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ လိပ်ဝင်သွားမတတ် ဖြစ်သလို ပြန်ထုတ်ချိန်မှာလည်း အုံလိုက်ကြွတက်လာသလို လီးဒစ်ကြီးက ဆွဲယူလာတယ်။
လီးဝင်ချက်တဗျိ.ဗျိ တဇွပ်ဇွပ်မြည်နေသလို ဆီးခုံချင်းထိသံက တဖန်းဖန်းမြည်နေပြီ။ သီရိရဲ့အော်ညည်းသံလည်း ပိုကျယ်လာတယ်။ အားးရှီးးရှီးးကိုကိုရယ်..အာားသီရိကောင်းရဲ့လားအားအရမ်းကောင်းတယ်ကိုကို.. အား.. ရှီး… ကြမ်းကြမ်းလေးလုပ်ပါကိုကို. သီရိပြီးချင်နေပြီ ကျနော်ချစ်သူလေးနာမှာစိုးလို့ ကြမ်းကြမ်းမလုပ်ခဲ့တာ။ ချစ်သူသာ တောင်းဆိုလို့ကတော့ ကုတင်ကျိုးပစေဆိုတဲ့ ကျနော်သီရိပုခုံးကိုဆွဲကိုင်ပြီး ကြမ်းလိုက်တယ်။ သီရိကလည်း ကျနော့်ခါးကိုဆွဲပြီး အောက်ကပင့်လာတယ်။ သီရိရဲ့ လက်သည်းချွန်တွေလည်း ကျနော့်အသားကို စူးနစ်ဝင်လာတယ်။ အဲလိုဖြစ်လေ စိတ်ကြွလေဖြစ်ပြီး တဘိုင်းဘိုင်း တဒိုင်းဒိုင်းမည်အောင် လိုးလိုက်တယ်။ ဖန်းးဖန်းးဖန်း..ဗျိ.ဗြိ..ဘွတ်.ဖန်းးးဖန်း အား..ကိုကိုသီရီပြီးပြီအားးး သီရိကအကြောဆွဲသလို တချက်နှစ်ချက်ခန့်တွန့်ကာ ငြိမ်သွားပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မပြီးသေးဘူး လိုးလို့ကောင်းဆဲ။
သီရိပြီးသွားတော့ အရည်တွေထွက်လာတာကြောင့် သီရိအဖုတ်က အမြှုပ်တွေပါထလာတယ်။ လိုးရတာလည်း အရမ်းကောင်းလာတယ်။ နောက်ထ်ငါးမိနစ်ခန့် ဆက်လိုးတော့ ကျနော်သုတ်တွေ သီရိအဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပေမယ့် ကျနော်လီးက နည်းနည်းမှ မညိုးသေးပါဘူး။ အား ကိုကိုခဏလောက်နားပါအုံး ကိုကိုရပြ.ီ.. ရီအဖုတ်နာလှပြီ ကျနော်အချစ်လေးသီရိကိုသနားလို့သာ ခဏရပ်ပေးလိုကတယ်။ လီကတော့ တောင်နေဆဲလေ။ ခဏတာရပ်ပေးလိုက်တော့ အာ..ကိုကိုပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလား ကျနော့ရဲ့တောင်နေဆဲလီးကိုကြည့်ပြီးသီရိကပြောလာတယ်။ သီရိအမြင်ပဲလေ ကိုကိုမပြီးသေးဘူးကွာအာ သီရိတော့ခဏနားချင်တယ်ကိုကိုနား..လေ အချစ်..ဒါပေမယ့်ကိုကို မပြီးသေးဘူးနှော်အင်းပါ.သီရီသန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တယ်လာလေကိုကိုလုပ်ပေးမယ် ကျနော်ရေချိုးခန်းဘက်ကို သီရိလက်ကွဲဆွဲရင်း ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ရေချိုခန်းထဲ ရေပူ လေးကို ဖွင့်ပြီးရေနွေးလေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
အာ ကိုကိုကလည်းသီရိဘာသာလုပ်ပါ့မယ်ရဘူး ကိုကိုကလုပ်ပေးချင်တာလေအင့်အင်း..ကွာ ရှက်တယ်၊သီရိဟာလုပ်ပေးနဲ့၊ ကိုကိုဟာအရင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်.လာခဲ့ သီရိကျနော့လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး ရေနွေးစပ်ထားတဲ့ ရေဖြင့် ယုယုယယဆေးပေးတော့ ကျနော်လီးက ပိုပြီးမာလာပြန်တယ်။ အာ ကိုကို မာလာပြန်ပြီ၊တော်တော်ဆိုးတယ်ဟင်းးဟင်းးးသီရိအဲလိုကိုင်ပေးတော့ အရမ်းထလာတာလေမလွယ်ဘူးကွာ ဒီနေ့တော့အသက်တောင် အိမ်ပြန်ပါ့မလးမသိတော့ဘူးအများကြီးမလုက်ပါဘူးကွာ သူပျော့သွားရင် ရပ်လိုက်မယ်အင်းးးးပါ..ကိုကို့သဘော…ကိုကိုက လည်း စပြီးပဲလုပ်ပြီးပြီပဲလုပ်ပေါ့ သီရိကဆပ်ပြာဘူးရည်လေးညစ်ရင်း ကျနော့်လီးကို သေချာတိုက်ချွတ်ပေးတာ ဖင်ကြားရော ဂွေးဥတွေပါ ပြောင်အောင်ဆေးလိုက်တယ်။ ကဲရပြီကိုကိုအိပ်ခန်းထဲကပဲစောင့်တော့ ကျနော်လည်းသီရိကိုကုတင်ပေါ်က စောင့်နေလိုက်တယ်။
ခဏနေတော့ သီရိရောက်လာပြီး ကုတင်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ကာ လှဲနေတော့ ကျနော်က သီရိကိုလှမ်းဖက်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်။ သီရိလည်းပြန်နမ်းပြီး ကျနော်နှင့် သီရိလျှာတိုက်ပွဲစနေတာပေါ့။ ကျနော်လက်ကတော့ ဝက်မြီးလိုပဲ လှုပ်ရှားနေလိုက်တယ်၊၊ လုပျိုသိုး ကျနော်အတွက်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံရေးကို ကြုံဖူးနေတာကြာပါပြီ လိုးလည်းလိုးနိုင်တယ်၊ အကြာကြီးလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ လိုးပြီးရင် စွဲစွဲလန်းလန်းကျန်တဲ့ သဘောတွေကြောင့် ဇယားကပ်မှာ စိုးလို့ ကျနော်ရှောင်လိုက် စားလိုက်ပေါ့။ အခုက သီရိကိုတကယ်လည်းချစ်မြတ်နိုးပြီး လက်ထပ်ယူမှာမို့ အိမ်ကိုအပါခေါ်လိုးတာပါ။ သူ့ကိုလည်း စွဲလန်းနေအောင် ကျနော်လိုးမှာပါ။ အလိုးမခံဖူးသေးတဲ့ သီရိအခုဆို ကျနော့်အလိုကျ ဖြစ်လာပြီလေ။ ကျနော်က သီရီကိုဖက်ပြီး လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက် နားရွက်ကလေးကို ဖြေးဖြေးကိုက်လိုက်နဲ့ဆွပေးနေတာပါ။ အချို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကာမစိတ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာဟာ မတူဘူးလေ။
တချို့က လည်တိုင်လေးကိုနမ်းရင် ကာမစိတ်က အရမ်းကြွလာသလို၊ တချို့ကလည်း တကိုယ်လုံးပွတ်သတ်ပေးရင် စိတ်တွေအရမ်းထတယ်။ တချို့ကလည်း နို့စို့ပေးရင်အရမ်းကြိုက်တတ်တယ်လေ။ သိရီအကြိုက်မှန်းဆရင်း ကျနော်ကျနော်သီရိရဲ့ ကာမစိတ်ကို အသစ်တဖန်နှိုးဆွဖို့ လုပ်လိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကျနော့လီးကိုကိုင်ဆွပေးပြီး အင့်..ဟင်းးးးကိုကိုရယ်သီရိပြန်ဖြစ်လာပြီကွာသဲလေး ကိုကိုပြန်မှုတ်ပေးချင်တယ်ကွာကိုကိုသေဘာပါကိုကိုသီရိကောမကြိုက်ဘူးလားပြောစရာလိုလို့လားကိုကိုရယ်၊ အားလုံးကြိုက်ကြမှာပဲလေ ကျနော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်အတွက် သီရိပိပိကိုဒုတိယံပိ ယက်ရမှာပေါ့ဗျာတယ်။ ဒီအခေါက်ကတော့ ဆပ်ပြာရနံ့လေး သင်းသင်းမွေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ အဲဒါဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်ပါပဲ။ ပိပိအနံ့နှင့်တူမှ အရသာရှိတယ်။ မွှေးပြီးအေးစက်နေရင် အရသာပေါ့တာပေါ့ဗျာ။
ပိပိရနံ့ သင်းသင်းလေကသာ ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ။ ဒီတစ်ခါတော့ ပိပိကိုသေသေချာချာလေး ယက်လိုက်ဖို့ သီရိခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုဖို့အတွက် ချစ်လေး….သဲခါးအောက်အုံးခံလိုက်မယ်လေအင်းလေကိုကိုအဆင်ပြေသလိုလိုက်ပေါ့ အဲဒါဆိုခါးကြွပေး သီရိလည်းခါးကိုကြွပေးတဲ့အတွက် ကျနော်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးယူကာ သီရိခါးအောက်ထိုးထည့်လိုက်။ အနေအထားကတော့ ရွှေငါးပျော့။ သီရိပိပိက ပိုပြီးကြွလာတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ အသားအရည်က အခုတော့ ကျနော့်ကြောင့် နီရဲနေတာပေါ။ လိုးချက်ပြင်းပြင်းဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိပိအာနီရဲလို့ နေတယ်လေ။ ကျနော်လည်း သီရိခြေကို အပေါ်တွန်းတင်တော့ သီရိကလက်နဲ့ လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမာ သီရိရဲ့ပိပိသာမက စီရိရဲ့ဖင်နီနီလေးပါ ပေါ်လာတယ်။ တဏှာစိတ်တွေ မွန်ထန်နေတဲ့ ကျမော်အတွက်ကတော့ အကြိုက်ပေါ့၊၊ ကျနော်စိုဝကနေပြီ့း ပိပိအကွဲကြောင်းတစ်လျောက် ယက်လိုက်တယ်။
သီရိတကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားတယ်။ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတာလေ။ အားးးးကိုငိုရယ်..ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ကျနော်စအိုဝနီနီကလေးကိုလျှာနှင့် ထိုးမွှေလိုက်တယ်။ အာ……ရှီးးးးအားးးးးအမလေးးးးးး သီရိတစ်ယောက်လိမ့်နေအောင်ခံစားနေရတယ်။ စအိုဝနီနီလေးကို အယက်ခံလိုက်ရတဲ့ခံစားမှုက ကတဟ၌ဏှာစိတ်ကို ပြင်းပြစေတယ်။ ပိပိထဲက အရည်တေ့စီးကျလာတယ်။ ကျနော်ပိပိကို အလှည့်ပေးပြီး နှုတ်ခမ်းသားအား လက်နှင့်ဖြဲကာ လျှာနှင့်အတွင်းနံရံကို မွှေလိုက်တယ်။ အ အ…..အာ့အာ့…အားးးးးးရှီးး သီစိတစ်ယောက်တဆတ်ဆတ်တုန်သွားပြီး တအာ့အနှင့်ညည်းညူနေတော့တယ်။ အာ့ကိုကို.တော်ပြီကွာ..အားးသီရီသေလိမ့်မယ် ကျနော်လည်းရပ်မပေးဘူး အစေ့ကိုတပြွတ်. .ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။ အားလားးလားးဝိုးးးတော်ပြီအားးးးးကိုကို အိုးးး သီရီတစ်ယောက်အခံနိုင်တဲ့အဆုံး အသည်းအသန်ရုန်းကန်ပြီးထလာတယ်။
အာ..ကိုကိုတော်ပါတော့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲ..ချစ်အာ….ဘယ်လိုကြီးဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး၊ အသည်းတွေအူတွေ ပြုတ်ကျသွားသလို တလှပ်လှပ်နဲ့ကွာဟားးးဟားးကိုကိုအဲလောက်တောင် ကျွမ်းသလားကွာလာခဲ့သူများကိုနှိပ်စက်တာ ကိုကိုလည်း ပြန်ခံစားရမယ်ရပါပြီသဲရဲ့ ကိုကိုလိုးချင်ပြီမရဘူး.သူများခံရသလိုခံရမယ်လာ. အိပ်. ကျနော်လည်းလှဲအိပ်လိုက်တယ်။ သီရိက လာလေ..တင်ပါးအောက်ခေါင်းအုံးခံ သီရိတုန်းကလိုပြန်လုပ်မှာ ကျနော်လည်းခါးကိုပြန်ကြွပေးလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော့်ခါးအောက် ခေါင်းအုံးထိုးထာ့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခြေထောက်မိုးပေါ်ထောင်ပေး ကျနော်ခြေထောက်တွေမြှောက်ပြီးဒူးကွေးကာနေလိုက်တယ်။သီရိကကျနော့်ပေါင်ကြားခေါင်းထိုးဝင်ပြီးလီးကိုစစုပ်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့မသီရိကျနော့်ကိုလက်စားချေခန်းပေါ့ဗျာ။ကျနော်အော်ရပြီလေ။ပထမအခေါက်တာရှက်ရွံ့နေပေမယ့်ဒီတစ်ေခေါက်တော့လီးဒစ်တွေကိုလျှာနှင့်ယက်တယ်ဂွင်းတိုက်ပေးသေးတယ်ဗျ။
ပါးစပ်ထဲလီးငုံပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တယ်။ အားးးအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ကျနော်လည်း တအအားနှင့် ဖီးတွေအရမ်းကောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ လီးထိပ်ဝကို လျှာနှင့်ထိုးထိုးမွှေတယ်ဗျ။ လီးစုပ်ပေးရင်း ဂွေးဥကို ဖွဖွလေးညှစ်ပေးတယ်။ ကျနော့်လီးက အစွမ်းကုန်တောင်လာတယ်။ သီရိက လီးစုပ်နေတာကိုရပ်ပြီး ဂွေးဥလေးကို တချက်တချက်စီစုပ်လိုက်လုပ်တယ်ဗျ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျနော်အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တောင်တုန်တယ်ဗျ။ အားးလားးလားသီရီရယ်..အူးးး..အင်းးးးးသီရိလေကျနော့်ဂွေးဥကိုယက်ပြီး တွန်းတင်ကာ ဖင်ကိုယက်တယ်ဗျာ။ ကျနော်ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။ သုတ်တွေအရမ်းတိုးသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ လီးကိုသုတ်တိူးချက်က တဒုတ်ဒုတ်မြည်တယ်ဗျာ။ အားးရပြီ သဲကိုကိုပြီးသွားလိမ့်မယ်.. ကိုကိုထပ်လုပ်ချင်သေးတာဟင်းးးးဟင်းးသိပြီလားသူများကိုနှိပ်စက်သလို ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာလေအေးပါကွာ… ကြောက်ပါပြီ သီရိအလိုကျပြောလိုက်တယ်။
သူမကျေနပ်လို့ ပါမစ်ပိတ်ရင် ငတ်ရမှာလေကြောက်ရတယ်။ လင်မယားမှ မဖြစ်သေးတာလေ။ သီရီ..ချစ်လေးကုန်းပေးကွာအင်းကုန်းပေးမယ်လေ။ဘယ်လိုကုန်းရမလဲကုတင်စွန်းကုန်းပေး၊ကိုကိုအောက်ကနေလိုးမှာ သီရိလာ်းကုတင်စွန်းကုန်းပေးတယ်။ သီရိကုန်းပေးတော့ ဖင်ဝိုင်းလေး သီရိရဲ့အနောက်ပိုင်းက အရမ်းချစ်စရာကောင်းလှတယ်။ ကျနော်လည်း ကုတင်နားကပ်ပြီး သီရိအနေအထား နည်းနည်းပြင်လိုက်တယ်။ ပြီမှ ဖင်ကြားလီးကို အပေါ်တင်ပြီး လေးငါးခါပွတ်တိုက်လိုက်တယ်။ သီရိနည်းနည်းတုန်လှုပိသွားပြီး ကိုကိုနှော်..သီရိဖင်မခံဘူးနှော်၊ တော်ကြာဖင်ပြဲသွားလို့ဒုက္ခရောက်ရမယ်ကိုကိုမလုပ်ရက်ပါဘူး သဲရယ် ပါးစပ်ကသာပြောတာ စိတ်ထဲမှာတော့ လက်ထပ်ပြီးလို့ကတော့ တွေ့မယ်လို့ ကြိမ်းလိုက်တယ်။ ကျနေိာနှင့်တွေ့တဲ့ ဆော်တိုင်းက ဖင်လိုးခံတာကြိုက်ကြလို့ ဇော်မိုးလို့တောင် မခေါ်တော့ ဖင်လိုးကောင်ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတာလေ။
ကျနော်စိတ်ထဲ ကြိမ်းဝါးရင်း သီရိအဖုတ်ထဲ လီးခေါင်းမြှုပ်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ သီရိတချက်ကလေးတုန်သွားတယ်။ ဖြေးဖြေးလေးပဲ တရစ်ချင်းသွင်းတယ်။ လီးကဗျစ်.. ဗျစ်နှင့်တရစ်ချင်းတိုးဝင်သွားတယ်။ အာ့ကိုကို.အောင့်တယ်.ဖြေးဖြေးးကွာ’အေးပါသဲလေး သိတယ်လေ ဒီပုံစံကစစလိုးရင်း အောင့်တက်တာ သဘာဝပဲ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျနော်က သီရိကြောက်မသွားအောင် ဖြေးဖြေးလေးလိုးရင်း စအိုဝကလေးကို လက်သည်းနှင့် မထိတထိလေး ခြစ်ပေးရင်း သီရိတစ်ယောက် တဏှာစိတ်တွေထလာအောင် ထပ်ပြီးနိုဆွလိုက်တယ်။ ဖင်ကို မထိတထိလေးလက်သည်းနှင့် ခြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သီရိစိတ်တွေထန်လာပြီး အော်ညည်းလာတယ်။ အာ့. အင်းးဟင်းးးဟင်းးးကိုကို ကျနော်တဖြေးဖြေးနှင့် သီရီခံနိုင်မှန်းသိလာတော့ အရှိန်လေးထပ်တင်လိုက်တယ်လီးကဇွိ ဗျိ ဗျစ်ဗျစ်နှင့် ထိုးဝင်လိုက်ထွက်လာလိုက်ပေါ့။ အင်းးဟင်းးးး ကိုကို ကြမ်းကြမ်ေးဆောင့်ကွာ သိတယ်လေအဲလိုဖြစ်လာအောင် တမင်လုပ်ထားတာ။
စအိုဝကိုလက်သည်းနှင့် ခြစ်လေ အားမလိုအားမရ စိတ်တွေဖြစ်လေ ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာ သီရီကကြမ်းကြမ်းလေး လိုးခိုင်းတော့၊ စအိုဝကိုခြစ်နေတဲ့လက်ကို နေရာပြောင်းပြီး သီရိခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကိုကိုင်ပြီး ဝုန်းလိုက်တယ်။ ကုတင်ဘောင်တောင် တကျွီကျွီမြည်တယ်ဗျာ။ လိုးချက်က တဖန်းဖန်းမြည်နေသလို လီးဝသ်ချက်ကလည်း ဘွတ်ဘွတ်မြည်လာတယ်။ အားးးးကောင်းတယ်..ကိုကိုဇွိ..ဗျိ..ဗျစ်..ဗျစ်…..ဗွက်..ဘွတ်..ဖန်းးဖန်းးးးဖန်းးအားကိုကို…အိုး..အားးရှီးးးရှီးးး နှာမှုတ်သံနှင့်အတူ သီရိတစ်ယောက်ပြီးတော့မယ်။ ကျနော်လည်း အဆက်မပြတ်တွန်းလိုးရင်း သီရိခါးကို တင်းတင်းဆွဲကိုင်ပြီးလိုးတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေပြင်းလွန်းလို့ သီရီတင်ပါးတောင် ဖြူဖွေးတာကနေ ပန်းရောင်ကပြေးလာတယ်။ တဖြေးဖြေးနှင့်နီလာတယ်။ ကျနော်လည်း မိနစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လိုးလိုက်တယ်။ သီရိက အားမရှိတော့ဘူး သူကပြီးသွားလို့ ဒူးခွေနေပြီ။
ငါးမိနစ်လောက်အဆက်မပြတ်လိုးရင်း လီးကို အဆုံးထိကပ်ကာ သုတ်တွေပန်းထည့်လိုင်တယ်။ သုတ်တွေကုန်အောင် ပန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ သီရိခါးကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော်လွှတ်လိုက်တော့ ကုတင်ပေါ် မှောက်လျက်ကျသွားတယ်။ ကျနော်လည်း သီရိဘေးနားကပ်ပြီး ချစ်လေး..အိုကေရဲ့လားအားကိုမရှိတော့ဘူးကိုကိုရယ် ဖျော့တော့တော့လေသံနှင့်ပြောလေတော့ ကျနော်ရယ်ချင်သွားတယ်။ ကဲသဲခဏနားအုံး ကိုကိုစားစရာသောက်စရာတွေ ပြင်လိုက်ဦးမယ်အင်းပါကိုကို ကျနော်စားစရာသောက်စရာတွေပြင်ပြီးတော့ အိပ်ခန်းဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် သီရိကတော့ အိပ်ပျော်နေဆဲပါပဲဗျာ။ အေးကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းမှာ သီရိအအေးမိနေမှာစိုးတော့ စောင်လေးခြုံပေးတော့ သီရိလန့်နိုးသွားတယ်။ ဟင်..ကိုကို ဆိုပြီး ကျနော့်ကိုလှမ်းဖက်တဲ့အတွက် ကျနော်ပြန်ဖက်လိုက်ကာ နဖူးလေးကို အနမ်းတပွင့်ခြွေလိုက်ပြီး။
ဟော ချစ်လေးနိုးသွားပြီလားအင်းကိုကို ထလေ သီရိ..စားလို့ရပြီအင်း..ကိုကိုထူမှထမှာ ကျနော်ထပ်ပြီးအနမ်းလေးပေးရင်း သီရိကို အိပ်ရာပေါ်ထူမတ်ပေးလိုက်တော့ ကိုကိုသီရိအဝတ်အစားတွေပေးကွာ သီရိကခေါင်းက ဆံပင်ကိုသပ်ချရင်းပြောတော့ နေအုံးစီရိရဲ့ကိုကို အကျီင်္နှင့်ပုဆိုးခဏ ဝတ်ထားပါလားအင်းးကောင်းသားပဲကိုကို ကျနော် ပုဆိုးနှင့်ရှပ်တစ်ထည်ပေးလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ယူဝတ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်အဝတ်အစားလေးနှင့်လည်း သီရိက ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဗျာ။ လာလေ ချစ် ထမင်းသွားစားမယ်နေပါဦး ကိုကိုသီရိရေချိုးခန်းဝင်လိုက်မယ် သီရိရေချိုးခန်းကထွက်လာတော့ မျက်နှာသစ်လာတယ်။ ကျနော်သဘက်တစ်ထည် လှမ်းပေးရင်း ရော့လေ ချစ် မျက်နှာသုတ်လိုက်တော့အင်းပါကိုကို ဆိုပြီးသီရိသဘက်ကိုလှမ်းယူရင်း မျက်နှာနှင့်လက်တွေကို သုတ်လုက်တယ်။ ပြီးမှကျနော့်ကို ရော့ကိုကိုသိမ်းလိုက်တော့ ကျနော်လှမ်းယူရင်း သီရိကိုလက်ဆွဲကာ ထမင်းစားခန်းသို့ ခေါ်ယူလိုက်တယ်။
ထထမင်းစားပြီးတော့ အခုမှပဲနေသာတော့တယ် ကိုကိုရယ် ဗိုက်ပြည့်သွားတော့ အားအင်တွေပြန်ပြည့်လာသလို ခံစားရတယ်။ အချိုပွဲလေးစားပြီး ချစ်လာကွာ အိပ်ခန်းထဲသွားရအောင်အင်းခဏတော့အနားယူကြမယ်အွန်းးးးးးခေါ်ပြန်ပြီကွာကြောက်လာပြီမကြောက်ပါနှင့် သဲကလည်း ကိုက်မစားပါဘူး၊ ချစ်ရုံလေးပဲအေးဒါကိုကြောက်တာ လူလည်းထူပူနေပြီဟားးးးးးးးဟားးးးး သီရိကိုအိပ်ခန်းထဲခေါ်လာပြီးအိပ်ရာပေါ်လှအိပ်ရင်း သီရိရယ် အိမ်မပြန်နှင့်တော့ကွာအာ ဘယ်ဖြစ်မလဲ မာမီဆူလိမ့်မယ်သီရိ..ကိုကိုတို့လက်ထပ်ရအောင်လေသီရိငယ်သေးတယ်ကိုကို ကျောင်လည်း ပြီးသေးဘူး.. နောက်ပြီးသီရိက လုပ်ချင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်အင်းပါကွာ သီရိရယ်.. ကိုကိုက အတူတူနေချင်လှပြီဟင်..အခုလည်း အတူတူနေတာပဲမဟုတ်လားချစ်ကလည်းကွာ အခုလိုနေရတာအားမရဘူးလေအားရအောင်နေလေ ကိုကိုအင်းတကယ်နော် အင်းးဒီနေ့တော့ ကိုကိုနေချင်သလောက်သာနေ။
ကိုကိုအကြိုက်သီရိနေပေးမယ်သိလားအဲလိုအလိုက်သိလို့ပိုချစ်ရတာအွန်းးးးးကိုကိုနဲ့ချစ်တာ မလွယ်ဘူး၊ နောက်ထပ်မရဘူးသိလားဟာကြာ.သဲကလဲ ကျနော်နောက်ထပ်အစပြုနိုင်အောင် သီရိကို နမ်းလိုက်တယ်။ တော်တော့ ကိုကိုသီရိနှုတ်ခမ်းတွေထူပူနေပြီ၊ လည်ပင်းမှာလည်း အကွက်တွေထနေတယ်၊ နောက်ပြီး သီရိနို့တွေလည်း ကျိမ်းနေပြီ၊ ကိုကို.ကိုလုပ်ပေးမယ် သီရိအဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်ပြီး. ကျနော့်လီးကို စုပ်တယ်။ တဖြေးဖြေးနှင့်သီရိလီးစုပ်တာ ကျွမ်းကျင်လာတယ်။ လီးကိုတပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်ပေးနေတယ်။ ကျနော်လည်း လီးက အရမ်းတောင်လာပြန်တယ်။ တဏှာစိတ်က ပြင်းပြလာလို့ သီရိပိပိကိုမှုတ်ချင်လာတော့ သဲ ကို့မျက်နှာအပေါ်ခွလိုက်ပါလားအာ မလုပ်ရဲဘူးလုပ်ပါကွာ ကိုအရမ်းဆန္ဒတွေပြင်းလာလို့ပါကန့်တော့ကိုကိုသီရိတက်ပေးမယ် သီရိကကျနော့်အပေါ်ကားယားခွကာ မျက်နှာပေါ်တက်ထိုင်တယ်။
ကျနော်လည်း သီရိဖင်ကို လက်နှစ်ဘက်နှင့်မကာ အဖုတ်ကိုပါးစပ်နှင့် နေရာကျအောင် လုပ်လိုက်ပြီး ယက်လိုက်တယ်။ ကားယားခွထားရတော့ သီရိပိပိဟာ နည်းနည်းဟနေတာ။ သီရိဆီကထွက်တဲ့ အရည်တွေပါးစပ်ထဲ ဝင်လာတယ်ဗျ။ မြိုလည်းချထပ်ယက်ပေါ့။ ပလပ်..ပလပ်…ပလပ်အာ့..အင်းးဟင်းးဟင်းးးးးး သိရီဆီကညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ လျှာနှင့်အားရပါးရ ယက်လေ မေးကသီရိဖင့်နှင့် အဖုတ်ကြားထိလေ၊ အရည်တွေလည်း တစက်စက်ကျလေ။ ကျနော်လည်းမြိုချလေ။ သီရိကို ရှေ့နည်းနည်းရောက်အောင်ပို့ရင်း သီရိဖင်ကိုပါ ယက်လိုက်တယ်။ စအိုဝလေးက စူတူတူလေးဖြစ်နေတာလေ။ အားးးကိုကို အရမ်းကောင်းတယ်ကိုကိုရယ် သီရိဆီကညည်းသံတွေထွက်လာလေ။ ကျနော်ကြမ်းကြမ်းယက်လေပါပဲ။ သီရိအသံတွေ ဆူညံနေတာလေ။ နောက်ဆုံးသီရီအစေ့ကို အောက်ကနေပြီး ကလော်ပြီးလျှာနှင့်ထိုးတော့။
အားးဟားးးဟားးးးအရမ်းကျိမ်းနေပြီ ကိုကိုတော်ပါတော့ သီရိမနေတတ်တော့ဘူးကွာ.. အင်းးဟင်းးးးအားးး သီရိရပ်ခိုင်းတော့ ကျနော်လည်းရပ်လိုက်တယ်။ သဲ..ကိုကိုအပေါ်ကတက်ပြီးလုပ်ကွာအင်း..လုပ်ကြည့်မယ်ကိုကို သီရိအောက်ကိုရွှေ့သွားပြီး ကျနော့်အပေါ်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ လီးကိုကိုင်ပြီး ပိပိနှင့်တေ့ကာထိုင်ချလိုက်တယ်။ ဗျစ်..ဗျစ်..ဗျစ်အာ့… ဆိုပြီးတချက်ကြွလိုက်ကာ သီရိထက်ထိုင်ချတယ်။ သီရိမျက်နှာလှမ်းကြည့်တော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီးဇိမ်ယူနေတာ။ ပြီးတော့မှ သီရိက မ်ြမြ်လေးလုပ်တယ်။ လုပ်ရင်းညောင်းနေရင် ကြိတ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်တယ်။ သီရိအပေါ်က ဆောင့်ချချက်ကြောင့် လီးကအဖုတ်ထဲတဗျိ.. ဗြိတဘွတ်ဘွတ်တဖန်းဖန်းမြည်လာတယ်။ အင်းးဟင်းးးဟင်းးး..အားးး ငါးမိနစ်လောက်လုပ်လိုက်တာ သီရီမောဟိုက်နေတဲ့ အသံကြားတွေကြားလာရတယ်။
အားးဟင်းး အာတော်ပြီကိုကိုသီရိညောင်းနေပြီအဲဒါဆိုလည်း သီရိကကိုကို့ခြေထောက်ဘက် မျက်နှာမူပြီလုပ်ကြည့်ပါလား သီရိလည်း အနေထားမှန်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး လီးကိုပိပိထဲထည့်လိုက်တယ်။ လူကတော့ ခြေရင်းဘက်လက်ထောက်ပြီး ထိုင်လိုက် ထလိုက်လုပ်ပေးတယ်။ ကျနော်က သူ့တင်သားတွေကို တွန်းတင်လိုက်အောက်သို့ ချလိုက်နှင့် သီရ်ိမညောင်းရအောင် အားကူပေးလိုက်ရင်း လိုးရတယ်။ သီရိဆီက ညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ ညည်းသံတွေထွင်လာသလို သီရိဆောင့်ချက်က ပိုသွက်လာတယ်။ အာ့…ရှီးးးရှီးးးအာ့အင့်ဟင်းးးးးးူးဇွိ..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်အားးးးကိုကိုသီရိမရတော့ဘူးးးးအားးးသီရိ ဆင်းလိုက်ကိုကိုလုပ်မယ် သီရိလည်းကျနော့်အပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်ကလေးအိပ်တော့ ကျနော်သီရိခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်ကာ ဖင်ကိုအပေါ်ဆွဲထောင်ပြီး အပေါ်စီးကနေ လိုးလိုက်တယ်။
လိုးချက်ကပြင်းလွန်းလို့ လီးဝင်ချက်ကတဗျိဗျိ တဇွိ ဇွိ နှင့်မြည်သလို ဆီးခုံချင်းရိုက်သံတဖန်းဖန်းထွက်နေတယ်။ ဖန်းးးဖန်းးးးဖန်းးးအားးးးအမလေးးအားးးကောင်းတယ်.အားးး ကျနော်လည်း အားရပါးရလိုးထည့်လိုက်တယ်။ အပျိုစစ်ကို ဒီလိုလိုးရတာ အရမ်းလည်းဖီးရှိတယ်။ လိုးရင် အားနှင့်လိုးနိုင်ပြီးကြာကြာလိုးလေ မိန်းကလေးက စွဲလန်းလေဆိုတော့ နောက်အကြိမ်ရအောင်လို့ အစွမ်းကုန်လိုးနေတာပါ။ သီရိကလည်း ကြမ်းကြမ်းလိုးလေကြိုက်လေ။ အော်ညည်းလေပါပဲ။ ဖန်းးးဖန်းးးဖန်းးးးအားးး..အင့်….ဟင့်..အားးးးသဲကောင်းလားးကောင်းတယ်ကိုကို ကြမ်းကြမ်းလေးလိုးပေး ကြမ်းလေကြိုက်လေအာဂသတ္တိပိုင်ရှင်သီရိ ၊ ကြမ်းကြမ်းလိုးတတ်တဲ့ ကျနော်နဲ့ကက့က်တိ၊ အမြဲလိုးရရင်ကောင်းမှာ။ မြန်မြန်လပ်ထပ်ပြီး အမြဲဒီလိုနေပစ်ချင်တာလေ။ ကို ကို အားးးးကောင်းတယ်ကိုကို ဆီးခုံချင်းပွတ်တိုက်လို့အမွေးတွေ တဗျစ်ဗျစ်မြည်နေသလို သီရီလည်း အရည်တွေထွက်လာတယ်။
အမြုပ်တွေလို ဖြူဖြူအနှစ်တွေဖြစ်နေတယ်။ တဘွတ်.. ဘွတ်မြည်လေပဲ သီရိကခေါင်းအုံးက်ို လက်နောက်ပြန်လှမ်းကိုင်ရင်း အားးးအင်းးးးးးဟင်းးးးးးးအားကောင်းတယ်ဘွတ် ဖတ် ဖန်းးဘွတ် ဘွတ်..ဘွတ် အပျိုအဖုတ်မို့လို့သာလေသံမထွက်တယ်။ တကယ်ဆိုဘွိ ဘွတ်ဆိုတဲ့ လေသံထွက်လောက်အောင် မြန်မြန်လေးလိုးလိုက်တယ်။ ဆီးခုံနှစ်ခလုံး အရည်တွေစိုချွဲနေတာ။ သီရီအဖုတ်ထဲကထွက်တဲ့ အရည်တွေဖင်ကြားထဲအထိ စီးဆင်းသွားနေတယ်။ လိုးချိန်နာရီဝက်နီးပါးလောက် အားရပါးရလိုးလိုက်တဲ့အခါ ကျနော်လည်း သုတ်တွေထွက်သွားတယ်။ သုတ်ထွက်သွားတာတောင် အချက်ငါးဆယ်လောက် မနားတမ်းဆက်လိုးလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ပျော့ခွေသွားပြီး မျက်နှာကလေးကို ချောင်ကျသွားတော့တယ်။ အဲဒီဧန့က လိုးတာလေးချီမြောက် လိုးပစ်လိုက်တယ်။ သီရိခင်မျာ လမ်းတောင် ဖြောင့်အောင် မနည်းလမ်းလျောက်နေရလေတော့သည် …..ပြီးပါပြီ။
ဘေးခန်းက စော်ကြီး ကို က သူသတိထားမိနေတာ ကြာပြီ ထိုသို့ သတိထားမိရလောက်အောင်လည်း စော်ကြီးက အိုးတောင့်လေသည် ။ ဖင်ကြီးတွေများ မွုတ်ပြီးလိုးလိုက်လို့ကတော့ အို ဘာပြော ကောင်းမနည်း … သို့သော် ထိုစော်ကြီးက ယောင်္ကျား ရှိလေသည် ။ သူများသားမယားကိုဆို သူမပြစ်မှား ဒါပေသိ ရံဖန်ရံခါ ထိုအမျိုးသမီးက သူ့ကိုလိုက်လိုက်ငေးနေသည် ကတော့ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသလိုလိုသူထင်မိသည် ။